Julaị 20nke bụ ụbọchị pụrụiche na ụbọchị ọjọọ, pụrụiche maka Henan Zhengzhou City, yana ndị China anyị niile. Site n'ụbọchị taa, Henan Zhengzhou City zutere oke mmiri ozuzo nke a na -ahụbeghị kemgbe ọtụtụ afọ, nke mere ka ụfọdụ mmadụ nwụọ na ọtụtụ ndị obodo China efunahụla ụlọ ha.
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ nnukwu ọdachi, mana na ọdịdị nke ọdịdị, naanị ihe anyị nwere ike ime bụ ime ike anyị niile iji napụta ma nyere ibe anyị aka. N'ịbụ onye na -eche ọdachi ahụ, ndị China gosipụtara ịdị n'otu na -enweghị atụ, mmụọ nke nraranye nke achọghị ọdịmma onwe onye. Enweghị ezinụlọ dị n'ihu obodo a, onyinye, ndị ọrụ afọ ofufo, onye ọ bụla na -enye onyinye nke ya. nwere ike maka ọdachi a. E zipụrụ gọọmentị na ụlọ ọrụ ndị metụtara ya ngwa ngwa, etinyere ọtụtụ usoro dịka nnapụta, igwu mmiri na inye onyinye ngwa ngwa.
Tupu ifufe na mmiri ozuzo, ka anyị buru ya. Ekwesịrị ka ewughachi ụlọ ahụ mebiri emebi, n'agbanyeghị na ọnọdụ anyị dị anya n'ebe ahụ, mana obi anyị dị na ha. N'oge nnapụta ahụ, onye na -egwu ihe na -arụkwa ọrụ dị oke mkpa, dị ka igwu ọwa iji belata ọkwa mmiri. Aili dị ka akara ochie nke ụlọ ọrụ na -ahụ maka ihe owuwu, anyị ga -eme nke ọma iji nyere Henan Zhengzhou City aka iweghachite ụlọ ahụ na -ekpo ọkụ.